सल्लाह Archives | Nepali In Japan
1Feb By Nepali In JapanNo Comments
जापानमा जागिर परिवर्तन गर्ने प्रकृया, परिवर्तनपछिका कानूनी प्रक्रिया, कम्पनीको छनौट आदि विषयमा यस अघिको लेखमा हामीले धेरै जानकारीहरु लेखिसकेकै छौं । आजको यस लेखमा भने हामी जापानमा सफलताका साथ काम गर्न चाहनु हुन्छ भने तपाईले ध्यान दिनु पर्ने केही कुराहरुबारे बताउन गइरहेका छौं । जापानमा काम गर्दा तपाईले बढी ध्यान दिनु पर्ने १० ओटा प्रमुख पक्षहरु यहाँ दिइएको छः जागिरसम्बन्धी विवरण यो बुँदा तपाईलाई सामान्य लाग्न सक्छ । तर तपाईले गर्न चाहनु भएको र उनीहरुले तपाईबाट अपेक्षा गरेको चिज फरक हुन सक्छ । कम्पनीले तपाईबाट के कुराको अपेक्षा गरेको छ भन्ने कुरामा तपाईले बढी ध्यान दिनु पर्छ । रोजगारीका सिलसिलामा यस्ता कयौं कामसम्बन्धी विवरण हुनसक्छन् जसमा जुन शीर्षकको काम दिइएको त्यसको तुलनामा निर्वाह गर्नु पर्ने भूमिकाहरु भने नितान्त फरक हुन सक्छन् । अर्थात् गर्नु पर्ने कामको ‘टाइटल’ एउटा तर काम अर्कै...
जापानी जीवनशैलीबाट सिक्न सकिने स्वास्थ्य र सौन्दर्य टिप्स
जापानमा रहँदा स्वस्थ रहन के गर्ने भन्ने विषयमा यसअघिका लेखहरुमा पनि धेरै जानकारी लेखिसकिएको छ । आजको लेखमा जापानी जीवनशैली र यसबाट सिक्न सकिने राम्रा पक्षहरुबारे थप केही जानकारी दिने तयारी गरिएको छ । खानेकुरा जापानी खानेकुरा स्वादिष्ट र स्वास्थ्यबद्र्धक हुन्छ । यसमा माछा, सिविड्स, तरकारी , उसिनेको चामल र फ्याटको मात्रा एकदमै थोरै हुने नूडलस पर्छन् । साथै मिसो सुप पनि यसमा समावेश हुन्छ । उनीहरुको खाना प्राय ग्रिन टि र ताजा फलफुलमा गएर अन्त्य हुन्छ । उनीहरु रातो मासुको सट्टा माछा खान मन पराउँछन् । यसले मुटुरोग र केही प्रकारका क्यान्सर लाग्नबाट बचाउँछ । सिविडमा प्रचुर मात्रामा प्रोटिन, पोटासियम र आयोडिनको मात्रा हुन्छ । साथै यसमा अन्य पोषक तत्व पनि धेरै मात्रामा पाइन्छ । यसले स्तन क्यान्सरको जो खिमलाई न्युनिकरण गर्छ । सिविड सुप, सुसि र सलादमा मिसाएर खाइन्छ । जापानमा ताजा हरियो तरकारीको प्रय...
23Jan By Nepali In JapanNo Comments
जापानी साथी बनाउँदा ध्यान दिनु पर्ने कुराहरु
सन् २०१४ को अगष्टमा जापानमा आउँदा आफू बस्न गइरहेको जापानी समूदायमा आफुलाई पूर्ण रुपमा घुलमिल गराउँछु भन्ने अटुट विश्वासका साथमा आएको थिए । हुन त मलाई पटक पटक यही भनिएको थियो कि ‘तैले कहिले पनि जापानी मासिहरुलाई आफ्नो साथी बनाउन सक्दैनस्,’, ‘त जापानमा सधैं बाहिरिया नै हुन्छस्,’ आदि आदि । मलाई यो कुरामा विश्वास गर्न सधैं गाह्रो नै भयो । हुन पनि हामीहरु सबै मानव नै त हौं, होइनौं त ? त्यसो भए जापानमा साथी बनाउने कुरा यति धेरै गाह्रो किन हुने होला ? जापानमा यत्तिका बर्ष बसेपछि जापानबारे मेरो कयौं सोचाइहरु परिवर्तन भइसके । जापानमा साथी बनाउन अन्य देशको भन्दा खासै धेरै फरक थिएन । यो भनिरहँदा मैले आफूलाई भाग्यमानी महसुस गरेको छु । जापानमा बसिरहेका हामी कयौं गाईजिन (विदेशीहरु)यस मामिलामा विभाजित छन् । मेरो व्यक्तिगत अनुभवले पनि यही भन्छ कि तपाइ जापानी नभए पनि तपाईले जापानी मानिसलाई साथी बन...
जापानीहरुसंग कहिल्यै पनि नसोध्नुस् यि कुरा
जापानमा आउनुअघि यहाँको रहनसहन र वातावरणवारे जानिराख्नु उपयुक्त हुन्छ भनेर हामीले पहिलेदेखिनै भन्दै आइरहेका छौं । जापान आउने तयारी गर्दै हुनुहुन्छ वा हालसालै जापान आउनुभएको छ भने यहाँको भाषा संस्कृति र मानवीय व्यवहारहरुका बारेमा तपाइले बुझ्नैपर्ने हुन्छ यसरी जापानीहरुको व्यवहार र उनीहरुको आनिवानी बुझ्न सकियो भने यहाँ रोजगारी खोजी, वसोबास तथा अन्य सामाजिक कृयाकलाप तथा दैनिक व्यहार लगायतका बिषयमा सहज हुन्छ । अत्यन्त मिहिनेती, मिजासिला र सहनशिल जनताको रुपमा विश्वभर ख्याति कमाएका जापानका नागरिकहरु धेरै कुरामा अत्यन्त खुसी हुने स्वभावका हुन्छन् तर यस्ता केही कुराहरु छन् जसका बारेमा तपाइले सोध्नुभयो वा कुरा गर्नुभयो भने पनि सो कुराले उनीहरुलाई दुखि तुल्याउँछ । उस्तै परे रिसाउँछन् पनि तर सबैको हकमा त्यो लागू नहुन पनि सक्छ । नि - हाउ (चिनियाँ अभिवादन) भेटघाटका समयमा प्रयोग गरिने शव्दहरुमा जाप...
9Sep By NIJ AdminNo Comments
जापान अनुभव, सल्लाह
- जिज्ञान कुमार थापा सुरुवातमा नै भनिहालौं, यो लेखको उदेश्य रेष्टुरेन्ट व्यवसायीहरुलाई बचाउ गर्नु वा कुक पेशाका नेपालीहरुलाई उस्काउनु हैन । कोरोनाको प्रभाव, बदलिंदो कानुनी र प्रशासनिक अवस्था आदिले गर्दा पहिलेकै मोडेलमा जापानमा इन्दो-नेपारु रेष्टुरेन्टको व्यवसाय अब चल्न गार्हो हुने बिषयलाई यहाँ उजागर गर्न मात्र खोजिएको छ। बिभिन्न समचार र लेखहरुबाट पनि अधिकांश नेपाली रेष्टुरेन्टमा काम गर्ने कुक पेशाका कामदारहरु ठूलो रकम तिरेर जापान आएको हुन्छन भन्ने कुरा त सर्व बिधितै छ। सूचनाको यति पहुँच हुदापनि किन सबैकुरा बुझेर पनि यति धेरै समय र पैसाको लागानी गरेर आउनु भयो त ? भन्ने प्रश्नको जवाफमा प्राय सुनिने भनेको "डिपेन्डेन्ट भिषा पाउने भएकोले" भन्ने हो। एकथरी मानिसहरु १० बर्ष साच्चै कुक पेसामा अनुभवि दक्ष सेफ भए पैसा तिरेर आउनै पर्दैन, पैसा तिरेर आउनेहरु त हातमा इलम नभएकाहरु हुन भन्ने तर्क ...
8Sep By NIJ AdminNo Comments
गरिरहेको काम छाड्नुपर्यो ? यसो गर्नुस्
प्राय हरेक जागिरको निश्चित अवधि हुन्छ । तर कसैले करार अवधि समाप्त हुनु अघि नै जागिर छाड्न चाह्यो भने के हुन्छ ? कामको सिलसिलामा आइपर्ने अनपेक्षित कार्यभार, निजी जीवनसँग बेमेल, हिंसा, सहकर्मीसँगको समस्या आदिका कारण बीचमै जागिर छोड्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । कतिपय अवस्थामा त जागिर नछाडि नहुने स्थिति उत्पन्न हुन्छ । त्यसैले यस्तो बेलामा आफूलाई अप्ठ्यारो स्थितिमा राख्नु भन्दा पार्ट-टाइम कामदारको रुपमा आफ्नो हक के के छ भनेर पत्ता लगाउनुहोस् । तपाईको रोजगारदाताले तपाईलाई जागिर छाड्न दिएन भने के हुन्छ ? आदिबारे बुझ्नुहोस् । जापानमा जागिर बीचमै छाड्नु अघि थाहा पाउनु पर्ने कुराहरुः तपाईसँग जति बेला पनि जागिर छाड्ने कानूनी अधिकार हुन्छ यौनहिंसा लगायत आकस्मिक अवस्थामा करारको कुनै पनि समयमा जागिर छाड्न सकिन्छ, त्यो पनि कानूनी रुपमै । करारमा सहमति जनाइएको समय अगावै जागिर छोड्नु पर्यो भने पनि तपाईको...
7Feb By NIJ AdminNo Comments
जापानमा पछिल्लो समय विदेशी कामदारको माग निकै बढेको छ । इञ्जिनियर विशेषगरी कृत्रिम बौद्धिकताको क्षेत्रमा काम गरिरहेका इञ्जिनियरहरुको माग त झनै उच्च छ । के तपाइ पनि यस्तै इञ्जिनियर हुनु हुन्छ ? कि जापानमै आएर काम गर्ने योजना बनाइरहनु भएको छ ? जापानमा पढाई सकेर जागिर खानका लागि कम्पनी पो खोज्दै हुनुहुन्छ कि ? आफूलाई सुहाउँदो कम्पनी कसरी छान्ने भन्ने दोधारमा तपाइ हुनु हुन्छ ? आजको यो लेखमा हामीहरुले सुहाउँदो कम्पनी छान्ने तरिका बताउन गइरहेका छौं । तपाइको शैक्षिक योग्यता जति धेरै छ, अनुभव जति लामो छ रोजगारीका विकल्पहरु र अवसरहरु पनि त्यति नै धेरै हुनेछन् । तपाइ जापानमा विदेशीका रुपमा हुनु हुन्छ भने तलब सुविधा मात्रै सबै कुरा होइन । तलबबाहेक पनि कम्पनीमा तपाइले बुझ्नु पर्ने अनेक कुराहरु छन् । यो कुरा प्राविधिक क्षेत्रका कम्पनीमात्र नभई अन्य कम्पनी खोज्दा पनि लागू हुन्छ । अन्तराष्ट्रिय वातावर...
22Jan By NIJ AdminNo Comments
यि हुन् जाडो भगाउने लोकप्रिय जापानी खानाहरु
हिउँदको मुटु कमाउने जाडोमा जापानमा उमालेको खाना र ‘नाबे’ धेरै प्रयोगमा आउँछन् । यी खानकुरा लोकप्रिय त छँदैछन् उत्तिकै पोशिलो पनि छन् । आजको यस लेखमा हामीहरुले ‘लिभिङ इन जापान’ले तयार पारेको जाडोयामका खानेकुराको सूचिबारे बताउन लागेका छौं । १. ओ–देन यो उसिनेको र खाना र नाबे दुबै हो । यो क्लासिक प्रकारको खाना हो । यो विशेषगरी जाडोयाममा खाइन्छ । यसमा ठूलो मूला, अण्डा, ‘कोन्याकु’ र माछाको लेदो लामो समयसम्म सुप स्टकमा राखेर उमालिन्छ । यो खानेकुरा रेष्टुराँमा खान सकिन्छ । अनि सुपरमार्केट र कन्भेनियन्स स्टोरमा पनि किन्न सकिन्छ । यसलाई घरमै पनि बनाउन सकिन्छ । क्षेत्र र परिवार अनुसार यसमा हालिने वस्तु, सुप स्टक र मसला भने फरक फरक हुन्छ । कसैले यसलाई भातसँग खान्छन् । कसैले खाजाका रुपमा खान्छन् । अनि कहिँ भने निबलका रुपमा । २. नाबे यसमा पहिला नै तयार पारिएको व्यञ्जनलाई प्लेटमा छुट्टयाएर खा...
12Oct By NIJ AdminNo Comments
जापानमा रहँदा विपत्तिको समयमा प्रयोग गर्नैपर्ने मोवाइल एपहरु
जापान प्राकृतिक विपद् धेरै आउने देशमा विश्वमै अग्रणी देश हो । यहाँ ताइफु, सुनामी लगायत प्राकृतिक विपद्हरु बारम्बार आइरहन्छ । ‘सेफ्टी टिप्स’ एप अन्तरराष्ट्रिय आगन्तुकहरुलाई प्राकृतिक विपद्बारे जानकारी दिन तयार पारिएको एउटा एप हो । यो एपले प्राकृतिक विपद्हरुको बारेमा सूचना उपलब्ध गराउँछ । सुर*क्षाको अनुभूति गर्दै पयर्टकहरुले जापानको भ्रमण गर्न सकुन् अनि अप-टू-डेट जानकारीहरु प्राप्त गर्न सकुन् भनेर जापानको टुरिजम एजेन्सीले सन् २०१४ को अक्टोबरमा यो एप लञ्च गरेको हो । यहाँ प्राकृतिक विपद्हरु धेरै आउने भएकोले यस्तो उपाय अपनाइएको हो । यो एप नेपाली, अंग्रेजी, कोरियन, सरलिकृत चाइनिज, परम्परागत चाइनिज, भियतनामिज, स्पेनिस, पोर्तुगाली, थाई, इन्डोनेसियन र टगालोग भाषामा उपलव्ध छ । यसले भुकम्पसम्बन्धी शुरुआती चेतावनी, सुनामी सम्बन्धी चेतावनी, मौसमसम्बन्धी चेतावनी र खतरायुक्त ठाउँ छाडेर अन्यत्र जाने...
21May By NIJ AdminNo Comments
विदेशीहरुले जापानमा सामना गर्नुपर्ने कठिनाइहरु
नेपालमा हुँदा सोचेजस्तै गरि जापान बसाइ सजिलो पक्कै पनि छैन । भाषागत बाधा लगायतका थुप्रै व्यवधानहरुले यहाँको बसाइलाई सोचेभन्दा कठिन बनाइदिन्छ । आजको लेखमा यसै विषयमा केही जानकारी दिने प्रयास गरिएको छ । तपाइको अनुभव सहकर्मीको जस्तो नहुन सक्छ तपाइको अनुभव कुनै पनि जापानीको अनुभवको तुलनामा भिन्दै हुन सक्छ । तपाइ छुट्टै संस्कारमा हुर्किएर हजारौं मिल टाढा आएर नयाँ जीवनशैली अपनाउनु हुन्छ । जापानी सहकर्मिले यो अवस्था केही कठिन हुने सोचे पनि उनीहरुले तपाइ के कस्ता अवस्थाबाट गुज्रिरहनुभएको छ भन्ने कुराको भने हेक्का नराख्न पनि सक्छन् । पैसाका कुरा शुरुका दिनमा तपाइले अपार्टमेण्ट, फर्निचर, बैक खाता लगायतका सबै कुराको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले शुरुमा यो तपाइलाई निकै महंगो लाग्न सक्छ । विस्तारै विस्तारै यहाँको परिस्थीतिसँग भिज्दै गएपछि बानि पर्दै जान्छ । पारिवारिक सहयोग एउटै घरमा नबसे पनि प्राय...
20May By NIJ AdminNo Comments
यि हुन टोकियोमा हुनसक्ने प्रमुख ठगी काण्डहरु
टोकियो विश्वको सबैभन्दा प्रमुख पर्यटक गन्तव्य मध्येको एक हो । यहाँका स्वादिष्ट परिकार, थिम्ड् क्याफे, साकुरा र यहाँका मन्दिर, स्राइन र दरबारका ऐतिहासिक कथाले जोकोहीलाई पनि सजिलै आकर्षित गर्छन् । जापान विश्वमै सुरक्षित देश पनि हो तर यहाँ केही ठगी काण्डहरु समेत हुन्छन् र जापानमा बस्ने वा जापानमा घुमघामका लागि आउनेहरुले यस बारेमा पनि थाहा पाइराख्नु आवश्यक छ । आजको लेखमा यसै विषयमा केही जानकारी दिने प्रयास गरिएको छ । नक्कली साधु बनेर पैसा ठग्ने जापानमा नक्कली साधु बनेर पैसा ठग्ने काण्ड एकदमै विख्यात छ । यसमा पर्यटकहरु प्रमुख निशानामा पर्छन् र यो अकिहाबारा क्षेत्रमा बढी हुन्छ । बुद्धिष्ट साधुजस्तै कपडा लगाएर पर्यटकहरु समक्ष गएर ती ठगहरुले पैसा माग्छन् । उनीहरुले धार्मिक पुुस्तक देखाएर वा धर्मसम्बन्धी पाठ पढाएर दान गर्न लगाउँछन् । यस्ता किसिमका नक्कली साधुदेखि बच्नुपर्छ । उनीहरुलाई दिइएको पैसा...
17May By NIJ AdminNo Comments
आकस्मिक अवस्थामा एम्बुलेन्स बोलाउनुपरेमा के गर्ने ?
पछिल्लो समय जापानको नेपाली समुदायमा आकस्मिक निधन भएका घटनाहरु बढ्दै गैरहेका छन् । विशेषगरि हृदयघातका कारण अकालमै मृ*त्युवरण गर्नु परिरहेको अवस्था छ । हृदयघात होस् या अन्य जटिल किसिमका रोगहरु, शंका लागेमा हस्पिटल गएर जचाँउन कत्तिपनि ढिला गर्नु हुँदैन । अझ धेरै अवस्थामा आकस्मिक उपचारका लागि एम्बुलेन्स बोलाइहाल्नुपर्छ । आजको लेखमा हामी जापानमा आकस्मिक उपचारका लागि उपलब्ध क्लिनिक, हस्पिटल र तिनले दिने सेवाका साथै इमर्जेन्सीमा एम्बुलेन्स कसरी बोलाउने भन्नेलगायतका विषयमा जानकारी दिंदैछौं । यो जानकारी जापानमा बस्ने सबै नेपालीहरुका लागि उपयोगी हुने भएकाले पढिसकेपछि सेयर गरेर सबैमाझ पुर्याउन सहयोग गरिदिनुहोला भन्ने अनुरोध पनि गर्दछौं आकस्मिक क्लिनिक सामान्य क्लिनिकको समयभन्दा बाहिरको समय र बिदाको समयमा यदि तपाइको अवस्था एम्बुलेन्स नै चाहिने जस्तो गम्भीर छैन तर मेडिकल उपचारको चाहिँ आवश्यकता छ भने ...
21Apr By NIJ AdminNo Comments
अधिकांश टोकियोबासीलाई दैनिक जीवनका लागि कारको आवश्यकता छैन । तर यदि टोकियो लगायतका ठूला सहरहरुभन्दा भित्री भागहरुमा बस्दा भने कार चाहिन्छ । बच्चाहरुलाई कतै घुमाउन लिएर जानु पर्यो वा काममा पनि गाडी चलाएरै जानु पर्यो भने कार र सो कार चलाउनका लागि अनुमति पत्र अर्थात ड्राइभिङ लाइसेन्सको आवश्यकता पर्दछ । आजको लेखमा जापानमा ड्राइभिङसम्बन्धी के कस्ता व्यवस्था छन् त्यसका बारेमा जानकारी दिने प्रयास गरिएको छ । अन्तरराष्ट्रिय ड्राइभिङ पर्मिट आफ्नै राष्ट्रबाट अन्तरराष्ट्रिय ड्राइभिङ पर्मिट (आइडीपी) लिएर आउनु राम्रो हुन्छ । यसले १ वर्ष सम्म जापानमा गाडि चलाउन पाउने अनुमति दिन्छ । यदि लामो समय गाडी चलाउने हो र जापानमा कार ने खरिद गर्ने हो भने चाहिँ जापानी लाइसेन्स लिनु राम्रो हुन्छ । तर नेपालीहरुको हकमा नेपालमा जारी भएको अन्तराष्ट्रिय ड्राइभिङ मान्यता भएको लाइसेन्स नै भएपनि त्यसले जापानमा काम गर्दैन ।...